Imbali yelogo yeDisney: imbali yophawu kunye nexabiso layo njengenkampani | Abadali be-Intanethi
Imbali yelogo yeDisney
Isitudiyo soopopayi esidumileyo besisoloko sinathi, kangangokuba iye yaba ziinkumbulo ezininzi zobuntwana bethu. Yiyo loo nto ngenye imini uWalt Disney wagqiba kwelokuba athabathe uhambo olude oluya kuphawula ngaphambi nasemva kwihlabathi loopopayi.
Kule posi, Siza kukubonisa imbali yolu phononongo lubalulekileyo, i-studio egcwele i-fantasy, iikhathuni, amakhosazana kunye neenkosana, izilwanyana ezithetha njengomntu kunye neemeko zemilingo ezenze ukuba ibe yeyona studio igqwesileyo kwihlabathi.
1.1 Amanyathelo okuqala ayeziqalo
1.2 iiprojekthi zokuqala
1.4 Ukuzalwa kwentsomi
2 imbali yelogo
2.1 Ilogo yokuqala: Mickey Mouse
2.2 Uphawu lwesibini: Inqaba
2.3 Ilogo yesithathu: Disneyland
3 iipaki zeDisney
UWalt Disney, igcisa kunye nomyili woopopayi, wazalwa nge-5 kaDisemba, 1901 kwisixeko esidumileyo saseChicago. Ubonakala ngokuba ngumzobi wekhathuni owathi, ngenxa yeeprojekthi zakhe zoopopayi, umfanekiso wakhe waphenjelelwa kakhulu kuluntu lwaseMelika kwaye waphumelela ngenkulungwane yama-XNUMX.
Akadumanga nje ngokwenza istudiyo soopopayi sibaluleke kakhulu kwihlabathi, kodwa nokuba ngumdali ophambili wempuku edumileyo enike ubomi kunye novuyo kubabukeli abaninzi beDisney, odumileyo uMickey Mouse.
Amanyathelo okuqala ayeziqalo
Kuphela kwiminyaka yakhe yeshumi elivisayo, kwaye kwakudala ngaphambi kokuba abe ngumntu esimaziyo namhlanje, wayesaziwa ngokuhambisa amaphephandaba malunga nesixeko kunye nokuthengisa iimbotyi zejelly kubantwana abancinci.
Into abambalwa abakwaziyo kukuba wayesebenza kwaye ejongana nemicimbi yezopolitiko kuba wayegqalwa njengomfumani wembali ephezulu.
Kwiminyaka kamva wafudukela kwisixeko esidumileyo saseKansas kwaye apho waqala ukusebenza kwinto esiyaziyo namhlanje njengoMickey Mouse. Kulapho emva kokudibana nabantu abaliqela abamncedayo kule projekthi, waqala ukulungiselela oopopayi bokuqala, omnye wabo yayinguCinderella kunye noPuss in Boots.
Lo mhla wawubaluleke kakhulu kubathandi beMickey Mouse, ekubeni ibingunyaka owazalwa ngawo lo khathuni kwaye kwakungowe-1928, kwiminyaka emithathu kamva, apho waqala khona ukubonakala kumabonwakude.
Ibiyifilimu emfutshane ethe cwaka emnyama namhlophe. Yayiyimpumelelo kangangokuba kwiminyaka kamva, batyala imali eninzi kwiikhathuni zeDisney kangangokuba bafaka isandi. Le yindlela eyaqala ngayo ukuvela oopopayi besandi bokuqala.
Emva kokufa kwakhe, ngowe-1966, nasemva kokuba kufunyaniswe ukuba unomhlaza wemiphunga, wabanjwa sisifo sentliziyo esamshiya engenabomi kwaphela. Okwangoku, uthuthu lwakhe lukwi-Forest Lawn Memorial Park e-Glendale, eCalifornia.
Esi siganeko saphawula ngaphambi nasemva kwihlabathi loopopayi. Ukusukela ngoko, istudiyo seDisney saziwa kwihlabathi liphela. Bade baqhuba nokudalwa kweepaki zemixholo ezityelelwa yonke imihla ngamawaka nangamawaka abantu.
Ukuba usifumene esi sishwankathelo sifutshane sinomdla malunga nokuba wayengubani uWalt Disney kwaye wenza ntoni ukuze aziphilise. Awunakuphoswa yintoni elandelayo, imbali yelogo edumileyo.
Ilogo yokuqala: Mickey Mouse
Kubalulekile ukwazi ukuba ilogo yokuqala yeWalt Disney yavela emva kokudalwa kweMickey Mouse. I-logo yokuqala igcine iimpawu ezifanayo njengomzobo weMickey Mouse.
Le logo iphawulwe ngokujija kwayo okudumileyo kunye nokutshintsha kombala kwiscreen sabo bonke oomabonakude behlabathi. UMickey Mouse, owayesaziwa njengekhathuni yokuqala enexabiso eliphezulu lokuvelela nokubaluleka, yayiyeyona nto idumileyo ehlabathini.
Uphawu lwesibini: Inqaba
Okwesibini kunzima ukukhumbula ukuba awukhange ube namava ngokupheleleyo ukuqhubela phambili koyilo lweDisney. Le yinqaba edumileyo yeDisney. Le logo ibonakaliswe ngokubonakalayo nangokubonakalayo, kuba izamile ukubamba ingqalelo yoluntu lonke ngesandi kunye nomfanekiso wayo.
Yintoni ebonakalisa le logo kukuba, nangona ibonisa isayinwe yombhali ngokwakhe, iphinda ibonise imiphumo ethile ekhethekileyo eyenze ukuba ibe yinto ebalulekileyo kwaye imele uphawu.
Ilogo yesithathu: Disneyland
Umthombo: Creative Bloq
Umbono wesignesha kunye nomfanekiso kaMickey wawungenomdla kuphela, kodwa kwakunokwenzeka ukutsala kunye nokudala ipaki eyavelisa ihlabathi lemilingo apho ukuqhubeka nokukholelwa kumlingo kunye nokubamba ingqalelo. abancinci .
Yiyo loo nto ibhrendi ehombise ngakumbi kunye nenomdla ngakumbi yenzelwe ukuba idibanise amaxabiso enkampani kunye nokudalwa kwepaki yomxholo.
Ngoku kukho malunga neepaki ezili-14 ezisasazwe kulo lonke ihlabathi:
Ihlabathi leDisney eOrlando eliseFlorida: Iipaki ezi-4 zemixholo ezibizwa ngokuba yi-Magic Kingdom, i-Epcot, i-Animal Kingdom kunye ne-Hollywood Studios kunye neepaki ezi-2 zamanzi zokonwaba ehlotyeni.
Disneyland eAnaheim, eseCalifornia: Iipaki ezi-2 zomxholo ezibekwe eMelika.
I-Tokyo Disney Resort eTokyo, eseJapan: Ifumaneka eTokyo Disneyland naseTokyo DisneySea.
I-Disneyland, ehlala kwisixeko esidumileyo saseParis, e France: ineepaki ezi-2 zomxholo: Disneyland kunye neWalt Disney Studios.
IHong Kong Disneyland kunye neShanghai Disney Resort, ese China.
Uphawu lweDisney kunye nembali ziye zaphawula ngaphambi nasemva kwexesha loopopayi. Kangangokuba kwakwanele ukukholelwa kwimilingo kunye ngoncedo lweengcamango ezininzi kunye nobuchule, ukukwazi ukudala into engazange idalwe ngaphambili.
Uphawu olungakhange lufikelele kumajelo eendaba zikamabonwakude kuphela kodwa lude lwenze ijelo lalo likamabonwakude, elenzelwe abo baqhubeka bekholelwa kumlingo weDisney kunye nabantwana abathanda ukubukela iikhathuni yonke imihla.
Yiyo loo nto ukuba ungumntu othanda iDisney, sicebisa ukuba ufunde le post kude kube sekupheleni kwaye sikwacebisa ukuba uqhubeke ukhangela ulwazi malunga neDisney. Ibali alipheli apha, kuba inkumbulo kaWalt ​​Disney iya kuhlala ngonaphakade.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imbali yelogo yeDisney
Uzenza njani iileta ezintle zeepowusta
Ukhuphela njani ukuvelisa iibhrashi